Midangana ny vidin-tsolika: tafakatra 82 dolara ny iray barila | NewsMada
Midangana ny vidin-tsolika: tafakatra 82 dolara ny iray barila
Tafakatra amin’ny vidiny ambony indrindra ny iray barila, ankehitriny, eo amin’ny tsena iraisam-pirenena raha oharina hatramin’ny taona 2014. Miantraika mivantana aty Madagasikara izany fidangan’ny vidin-tsolika izany.
Mihenjana ny tady eo amin’i Etazonia sy i Iran. Manao ankivy toekarena amin’i Iran ny Amerikanina noho ny tsy faneken’ny Iraniana tsy hiroso amin’ny fikarohana nokleary. Entanin’i Etazonia ny ireo firenena mpanafatra solika amin’i Iran tsy hanafatra solika aminy intsony. Vokany, miakatra isan’andro ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena satria tsy ampy ny tolotra miohatra amin’ny tinady. Omaly talata 25 septambra, tafakatra 82 dolara ny salam-bidin’ny iray barila eo amin’ny tsenan-tsolika any Londres sy any New York. Famandrihana solika hotsinjaraina any amin’ny mpanafatra amin’ny volana novambra ho avy izao ity vidiny ity. Vidiny ambony indrindra raha oharina hatramin’ny taona 2014.
Anisan’ny antony tsy aneken’ireo firenena arabo mpamokatra solika, mpikambana ao anatin’ny vondrona Opep, hanentsina ny banga satria tsy tafiditra ao anatin’ny tsena ny solika vokarin’i Iran ka tsy mety hanampy ny solika vokariny ireo mpikambana.
Manoloana izany, nanao teny mahery ny filoha amerikanina, i Donald Trump, tao amin’ny fivoriamben’ny Firenena mikambana (ONU), tany New York, omaly talata. Nohitsiny fa “zava-poana ny fanampianay sy ny fiarovanay Amerikanina ireo firenena mpikambana ao amin’ny Opep nefa sahin’izy ireo ny mivarotra solika lafo dia lafo. Angatahiko amin’izy ireo ny hampidinana haingana izao vidin-tsolika izao”.
Tsy ampy ny fisondrotana 50 Ar isam-bolana
Manaraka ny onjan’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena koa ny eto Madagasikara. Na izany aza, tsy tena ampiharina ara-bakiteny ny tena vidiny, saingy tokony hampifamenoana ny banga ao anatin’ny taona iray, araka ny fiteny teknika hoe “lissage”. Tsy tanteraka anefa izany satria tsy ho zakan’ny mpanjifa mihitsy ka tsy maintsy mameno ny banga ny fanjakana. Manodidina ny 50 Ar isam-bolana isaky ny litatra ny fisondrotana ampiharin’ny fanjakana nefa tokony ho 180 Ar /l raha tena ampiharina ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena.
Ankoatra ny vidin’ny barila, miankina amin’ny sandan’ny Ariary miohatra amin’ny dolara koa ny ampiharana ny vidin-tsolika eto an-toerana, miampy ny masonkarena samihafa, toy ny saram-pitateran’ny sambo, ohatra.
Vao mainka hitombo ity vidin-tsolika ity satria hiditra amin’ny vanim-potoana ririnina ny any amin’ny ilabolatany avaratra ka tsy maintsy hitombo ny fandanian’ny mpanjifa, izany hoe, ny tinady.